ခွဲစိတ်ကုသရင် (၁၀) သိန်းနဲ့အထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကို တစ်ပြား၊ တစ်ချပ်မှ မကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသွားဆေးတဲ့ ဆေးနည်းလေးမျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ - TheeSayChin
နှလုံး သှေးကှောကဉွြးပှီး အသကရြှူုမဝ၍ ဆရာဝနနြှငြ့ပှ၊ဆေးမွားသောကသြောလြညြး သကသြာလှသညြ မဟုတပြါ။
နှှလုံး အထူးကုဆရာဝနကြှီးနှငြ့ပှကှညြ့ရာ ခှဲစိတဖြို့အကှံပေးပှီး ရကခြွိနြးပေးထားသညြ ဆိုပါသညြ။ထိုသူငယခြငွြး ကံကောငြးသညဟြု ဆိုရပလေိမြ့မညြ
ဆေးညှှနြးအတိုငြးဆောငရြှကခြဲ့ပါသညြ။ကှကသြှနဖြှူ သူငယခြငွြးအားလညြးမခှဲစိတစြခငွေပြါအကှောငြးကားခှဲစိတမြညဆြိုပါကသိနြး(၁၀)အထကသြာကုနကြမွညဖြှဈပှီးဝနထြမြးတဈယောကြ၏လစာအခှအနေနှငြေ့ လုံးဝမလှယကြူသောကှောငြ့ဖှဈလသညြေ။သူငယခြငွြးဆုတောငြးပှညြ့ပါသညြ။
ခှဲစိတစြရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကှောကဉွြးရောဂါ သိသိသာသာသကသြာသှား၍ဖှဈ လသညြေ။ထိုဆေးနညြးမှာ….(၁)ခငွြးစိမြးသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၂)ကှကသြှနဖြှူသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၃)ရှောကရြညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ
၊(၄)ပနြးသီးရှာလကာရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကထြို(၄)ခှကအြားဆတူရော၍ (၃)ခှကလြွှငြ (၂)ခှကကြနွအြောငြ ကွိုရပါမညြ။ခငွြးစိမြး ထို(၃)ခှကြ(၂)ခှကစြာကနွပြါကပွားရညစြဈစဈလကဖြကရြညပြနြးကနလြုံး(၃)ခှကနြှငြ့နနှငြးမှုနြ့ကှမြးသီးလုံး(၁)လုံးစာမွှထညြ့မှှပှေီးတဈညအိပနြှပထြားရပါမညြ။
ယူနီကုဒဖြှငြ့ဖတရြနြ နှှလုံး သှေးကှောကဉွှးပှီး အသကရွှူုမဝ၍ ဆရာဝနနွှင့ပွှ၊ဆေးမှားသောကသွောလွညွး သကသွာလှသညွ မဟုတပွါ။နှှလုံး အထူးကုဆရာဝနကွှီးနှင့ပွှကှည့ရွာ ခှဲစိတဖွို့အကှံပေးပှီး ရကခွှိနွးပေးထားသညွ ဆိုပါသညွ။ထိုသူငယခွငွှးွ
ကံကောငြးသညဟြု ဆိုရပလေိမြ့မညြ။ဖေ့ဘုတပြေါမြှဆေးနညြးကောငြးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတခြငွသြောစိတဆြနျဒလညြးမရှိသောကှောငြ့ထိုဆေးနညြးလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညှှနြးအတိုငြးဆောငရြှကခြဲ့ပါသညြ။ကှကသြှနဖြှူ
ခှဲစိတြစြရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကှောကဉွြးရောဂါ သိသိသာသာသကသြာသှား၍ဖှဈ လသညြေ။ထိုဆေးနညြးမှာ….(၁)ခငွြးစိမြးသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၂)ကှကသြှနဖြှူသတျတုရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊
(၃)ရှောကရြညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကြ၊(၄)ပနြးသီးရှာလကာရညလြကဖြကရြညပြနြးကနြ(၁)ခှကထြို(၄)ခှကအြားဆတူရော၍ (၃)ခှကလြွှငြ (၂)ခှကကြနွအြောငြ ကွိုရပါမညြ။ခငွြးစိမြး ထို(၃)ခှကြ(၂)